सरकारको नीतिले समृद्धिको आधार तय : अर्थविद् डा. खनाल «
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बाहिर हल्ला भएजस्तो हावादारी नभएको दाबी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल शनिबार गरेको साक्षात्कारमा खनालले मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले सुधार र सुशासनको पहल गरेको भन्दै कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको बताए ।
“केस्रा–केस्रा केलाएर हेर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि कोणबाट हावादारी देखिँदैन,” उनले भने, “सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मैले आलोचनात्मक रूपमा हेरेको छु ।” खनालले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई अघि बढाउने आयामको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यलाई एकीकृत गर्ने काम पनि भएको उनको भनाइ छ । यद्यपी कतिपय कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेको उनले स्वीकार गरे । “शहरीकरण गर्ने र ७ वटै प्रदेशमा उद्योग स्टेट खोल्ने कुरा अलिक महत्वाकांक्षी छन्,” उनले भने, “प्रत्येक गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम खोल्नेलगायतका केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।” उनले उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्न र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अघि बढाउन नीति तथा कार्यक्रमले थप आधार तय गरेको दाबी गरे ।
अर्थविद् खनालले केही कार्यक्रम छरिएका भए पनि ठीक ढंगले तर्जुमा गरिएको बताए । निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने र उनीहरूको कारोबार र उत्पादन लागत कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै, उनले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने र लगानीलाई सन्तुलित ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ९ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै भएको भन्दै उनले खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले जारी रहेका परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिएको, सरकारी खर्चको दक्षता बढाउने कामलगायत नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कुरा रहेको पनि उनले सुनाए । निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वद्धनमा सरकारले जोड दिएको पनि खनालले स्पष्ट पारे ।